Odayaasha Beelaha Degan Muqdisho Oo Difaacay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.(Akhriso) | Awdalmedia.com
Odayaasha Beelaha Degan Muqdisho Oo Difaacay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.(Akhriso)
Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelaha degan magaalada Muqdisho ayaa kulan ay xalay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay walaac kaga muujiyeen qoraal ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha oo ku saabsanaa ilalainta Hantida Qaranka, iyagoo difaacay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed.
Bayaan ka soo baxay Odayaasha dhaqanka oo ka koobnaa dhowr qodobo ayaa isugu jiray fariin iyo hadalo culus, waxaana xubnaha ku saxiixnaa ka mid ahaa Duubabka dhaqanka sida Imaam Maxamed Yuusuf, Ugaas Maxamuud Cali Ugaas iyo odayaal kale ayaa waxay fariin ugu direen Madaxweynaha, iyagoo xusuusiyay in hantida qaranka ay taallo dalka oo dhan.
Sidoo kale Odayaasha ayaa sheegay in loo baahan yahay in hoosta laga xariiqo waxa kulmiyay warqada Madaxweynaha iyo shirweynaha ka tashiga aayaha Gobolka Banaadir iyo dadka ku nool.
Odayaasha ayaa ku tilmaamay qoraalkii ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha inuu ahaa mid u eg in sumacada looga dilayo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Halkan hoose ka akhriso war murtiyeedka ka soo baxay Odayaasha dhaqanka.